समाचार धादिङमा वाम गठबन्धनको क्लिन स्विप
Ujyaalo शनिवार, मंसिर २३, २०७४ २०:१७:००
धादिङ, मंसिर २३ – धादिङमा प्रतिनिधिसभाका दुई र प्रदेशसभाका चारवटै क्षेत्र जितेर वाम गठबन्धनले क्लिन स्वीप गरेको छ ।
एमाले र माओवादीको गठबन्धनले धादिङमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई हराएको हो । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ मा फराकिलो मतान्तरले तथा क्षेत्र नं. २ मा झिनो मतले एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
धादिङ क्षेत्र नं. १ मा नेकपा एमालेका भूमिप्रसाद त्रिपाठीले प्रतिष्पर्धीभन्दा झण्डै २८ हजारको मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ । उहाँ ४९ हजार १ सय २१ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका विश्वप्रसाद अर्यालले २१ हजार ९ सय ६८ मत ल्याउनुभयो ।
यस्तै धादिङ क्षेत्र नं. २ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार खेमप्रसाद लोहनी विजयी हुनुभएको छ । एमालेका लोहनीले कांग्रेस उम्मेदवार भन्दा ६ सय ३९ मत मात्रै बढि ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । लोहनीको ३६ हजार २ सय ५३ र पाख्रिनको ३५ हजार ६ सय १४ मत आयो ।
यस्तै धादिङका चारवटै प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेशसभा २ ‘क’ बाट एमालेका उम्मेदवार डाक्टर रामकुमार अधिकारी विजयी हुनुभएको छ । उहाँ २०३६३ मतसहित प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको हो ।
उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रमेश धमला १९०१५ मत प्राप्त गर्नुभयो । ६१११८ मतदाता रहेको यो प्रदेशसभामा ४१३४३ मत खसेको थियो ।
यसअघि नै घोषणा भएका अरु तीन वटा क्षेत्रमा पनि वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । धादिङ १‘क’ बाट तीन नम्बर प्रदेशका सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे २७३३२ मतसहित विजयी हुनुभएको हो ।
त्यस्तै १‘ख’ मा माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेल २३३८२ मतसहित विजयी हुनुभएको छ । २‘ख’ मा माओवादी नेता जगतबहादुर सिंखडा १७६०५ मतसहित विजयी हुनुभएको छ ।